Imibhikisho – AMANDLA!
Tag archives: Imibhikisho
NgoLwesithathu olwedlule, izinkulungwane zabasebenzi zingene emigwaqweni njengengxenye yesiteleka sikazwelonke se-SAFTU (South African Federation of Trade Unions). Inyunyana ibibhikishela u-R20 ohlongozwayo weholo likazwelonke elisethulwayo njengamanje. Baqophe umlando abasebenzi ngokugodla amandla abo okusebenza ukuze bathuthukise izimo zabo zokusebenza, ngamazinga ahlukene empumelelo. NgoJanuwari 1973, imashi yabasebenzi abangu-2000 besuka e-Coronation Brick and Tile beya enkundleni yebhola eliseduze kwaba isiteleka …
Continue reading “I-Durban Moment”
Posted byAmandla Durban February 1, 2021 February 2, 2021 Posted inImportant People and SitesTags: Congres of South African Trade Unions, Imibhikisho, Izinyunyana zabasebenzi, The Durban MomentLeave a comment on I-Durban Moment